Zụta isotretinoin ntụ ntụ (4759-48-2) Onye nrụpụta - Buyaas
isotretinoin ntụ ntụ (4759-48-2)
Isotretinoin ntụ ntụ bụ ụdị vitamin A. Ọ na-ebelata ego mmanụ gland na-ewepụta n’arụ gị, ma na-enyere akwara gị aka ime ngwa ngwa. A na-eji Isotretinoin agwọ ọrịa akpukpo nodular nke na-emeghị ọgwụgwọ ndị ọzọ, gụnyere ọgwụ nje.
ntụ ntụ ntụ isotretinoin (4759-48-2)
isotretinoin ntụ ntụ (4759-48-2) Smmezi
Product Name ntụ ntụ isotretinoin
Chemical Aha Isotretinoin
Klaasị ọgwụ ọjọọ retinoids
molekụla Fnhazi C20H28O2
molekụla Wasatọ 300.4g
Nkịtị Monoisotopic 300.44 g / mol
Mgbu Point 189-190 ° C
Esi mmiri 462.8 ± 14.0 Celsius C na 760 mmHg
Ọkara Ndụ nke Ndụ Awa 10-20
Sume Nsogbu na DMSO; ethanol
Sịkwa akwa Tigwe 0 - 4 C maka mkpirikpi oge (ụbọchị ruo izu), ma ọ bụ -20 C maka ogologo oge (ọnwa)
Antinye A na-eme Isotretinoin iji gwọọ akwara ọrịa nodular siri ike (ụdị ụfọdụ nke ọnya siri ike) nke enyereghị ọgwụgwọ ndị ọzọ aka, dị ka ọgwụ nje. Isotretinoin nọ na klaasị nke ọgwụ akpọrọ retinoids. Ọ na - arụ ọrụ site n'ibelata ụfọdụ mmepụta ihe nwere ike ibute nsị.
Gịnị bụ ntụ ntụ isotretinoin (4759-48-2)
Isotretinoin ntụ ntụ makwaara dị ka 13-cis-retinoic acid, bụ ọgwụ ejiri eme ihe iji gwọọ akwara siri ike. N’oge na-adịghị anya, a na-eji ya egbochi ụfọdụ ọrịa cancer anụ, yana na ọgwụgwọ nke ọrịa ndị ọzọ. A na-eji ya agwọta ụdị ichthyosis na-arịa harlequin, ọrịa anụ na-egbu egbu na -akụ na lamellar ichthyosis. Ọ bụ retinoid, nke pụtara na ọ nwere ihe metụtara vitamin A, a na-ahụkwa ya n'obere anụ ahụ na anụ ahụ. Isomer ya, tretinoin, bụkwa ọgwụ na-egbu egbu.
Kedu ka isotretinoin ntụ ntụ (4759-48-2) ojiji
A na-eji ntụ ntụ Isotretinoin mee ihe maka akwara cystic na ọnya na-emeghị ọgwụgwọ ndị ọzọ. Ọtụtụ ndị na-ahụ maka mmiri ọgwụ na-akwadokwa iji ya maka ọgwụgwọ nke obere ọrịa otutu nke na-eguzogide ọgwụgwọ ndị ọzọ, ma ọ bụ na-emepụta ụcha anụ ahụ ma ọ bụ nke uche. Achọpụtaghị Isotretinoin maka ọgwụgwọ nke mbufụt prepubertal ma akwadoghị ya na ụmụaka na-erughị 12 afọ.
Ọ dịkwa ntakịrị irè maka hidradenitis suppurativa na ụfọdụ ikpe rosacea siri ike. A nwekwara ike iji ya nyere aka na-agwọ harlequin ichthyosis, lamellar ichthyosis ma ejiri ya mee ihe na xeroderma pigmentosum iji belata keratoses. Isotretinoin ejirila na-emeso oria fibrodysplasia ossificans progressiva. A na-ejikwa ya maka ọgwụgwọ nke neuroblastoma, ụdị nke cancer akwara.
Usoro ọgwụgwọ Isotretinoin egosiwokwa na ọ dị irè megide ọrịa mgbochi ọrịa jiji amụ nwa, mana ejighị ya maka ngosipụta a ebe enwere ọgwụgwọ dị irè karị. Isotretinoin nwere ike ịnọchite anya usoro ọgwụgwọ dị mma nke dịkwa mma maka cervix recalcitrant condylomata acuminata (RCA). N’ọtụtụ mba, anaghị anabata ọgwụ a ugbu a ma ọ bụ naanị ya ka ọ ga-eji ma ọ bụrụ na usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ adaghị.
isotretinoin ntụ ntụ (4759-48-2) usoro onunu ogwu
Ekwesịrị ịmalite ọgwụgwọ nke Isotretinoin na dose nke 0.5 mg / kg / d maka izu 4 ma mụbaa ka a na-anabata ruo mgbe a ga-enweta ngụkọta nke 120-150 mg / kg. Ighakota steroid na mmalite ọgwụgwọ nwere ike ịba uru n'ọnọdụ ndị siri ike iji gbochie mbido ahụ. Patientsfọdụ ndị ọrịa nwere ike ikwu ịgwọ ọrịa dị ala karịa usoro ọgwụgwọ akwadoro. Obere dị ala (0.25-0.4 mg / kg / d) nwere ike ịdị oke irè na ikpochapụ ihe otutu dị ka ọnụọgụ dị elu enyere maka otu oge yana iji nwee afọ ojuju dị ukwuu nke onye ọrịa. Agbanyeghị, abamuru nke mgbaghara mmehie dịtere aka adịghị oke yana ụdị ọgwụgwọ a dịka ọnụọgụ ọkọlọtọ. Usoro nhazi dosing dị ala (1 wk / mo) adịghị arụ ọrụ.
Patientsfọdụ ndị ọrịa chọrọ naanị otu ụzọ isotretinoin nke ọnụ maka mgbaghara ọrịa zuru oke, ebe ndị ọzọ chọrọ usoro ọmụmụ ọzọ nke ọgwụgwọ isotretinoin. Nchoputa choputara 38% nke ndi oria enweghi oria n’ime oge 3 sochirinụ, na, n’ime ndị ọrịa fọdụrụnụ, 17% ji usoro ọgwụgwọ ọzọ na-achịkwa, 25% na ọgwụ mgbochi mkpori na nke ọnụ, na 20% na usoro nke abụọ nke isotretinoin . Ntughari bu ihe karie n’ebe ndi oria ma obu umu nwanyi ndi nwere oria.
Zụta isotretinoin ntụ ntụ (4759-48-2) si Buyaas.com
Buru onye mbu inyocha “isotretinoin ntụ ntụ (4759-48-2)” kagbuo zara